फित्कौली हास्यव्यङ्ग्य सङ्ग्रह - पुच्छर व्यापार
पुच्छर व्यापार शेषराज भट्टराई
शरीरको मध्य वा अन्त्य भागमा अवस्थित अलग प्रकृतिको ठोसो फुर्को या झ्याम्टोलाई पुच्छर भन्ने गरिन्छ । शीर र पुच्छर प्राणीका दुई किनारा हुन् । बोलीचाली र व्यवहारमा पुच्छर शब्द हरेक ठाउँमा आउने गर्छ जस्तो सबै बारीका गरा सकिए पछिको लास्टको गरालाई पनि पुच्छरको गरा भन्ने चलन छ । काम गर्दै गर्दै गएपछिको सकिने, तुरिने भागलाई पनि पुच्छर भन्ने चलन छ । जहाजको पछाडिको भागलाई पुच्छर नै भन्ने गर्छन् । पुच्छर त्यस्तो चिज हो जसले अन्त्यावस्थालाई जनाउँछ । जहाँ शिर हुन्छ त्यहाँ पुच्छर पनि छ भनेर ठोकुवा गरे हुन्छ । पुच्छर नितान्त प्राकृतिक कृत्रिम र प्राणी अनुसारका अलग अलग विशेषताले वोष्ठित भएका हुन्छन् । यहाँ चर्चा गर्न लागिएको पुच्छर प्राकृतिक जुन प्राणीको शरीरमा चलायमान अवस्थामा रहने अनेक भाव भङ्गीका पुच्छर र यसबाट लाभ, हानी, दाना पानी जुटाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने सेरोफेरोमा केन्द्रित रहन्छ ।
पुच्छर असल दुच्छर सबै प्राणीको हुन्छ । पुच्छर रहित प्राणी संसारमै सम्भव छैन । जलचर थलचर चेपागाडा, माछादेखि लिएर मान्छेको पनि पुच्छर हुन्छ । उभयचर जुन जलथल जस्तोमा पनि प्राण धानी राखेको हुन्छ उसको पुच्छर नहुने कुरै भएन । कसैको पुच्छर लाज पचाएर बाहिरै निस्किएको हुन्छ भने कसैको लाज शरमले गर्दा पुच्छर दबाएर, लुकाएर, थन्क्याएर पुच्छरै छैन भन्ने भ्रममा छन् तर वास्तवमा पुच्छर चाहि प्रभुले अनिवार्य नै गरि दिएका छन् ।
सर्पको पुच्छर हुन्छ । देखिने पुच्छर भन्दा लुकेर बसेको पुच्छरले खास काम गरेको हुन्छ । पुच्छर पुच्छरको सम्मिश्रणबाट सर्पले फुल पार्छ । फुलबाट फेरि पुच्छर भएकै सर्पको जीवन चक्र जारी रहन्छ । गणेश भगवानको बाहन जसको नाम लिनै पर्दैन, उसको पुच्छर हुन्छ । शिव भगवान् देवाधिदेव महादेवको बाहानको पुच्छर छ । कसैको पुच्छर अत्यन्तै चालु दुनियाँ मोहित हुने खालको हुन्छ भने कसैको पुच्छर बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार भने जस्तो हुन्छ । नेपालका भू.पू. प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराइको पुच्छरलाई लौरो न हतियारको संज्ञा दिन मिल्छ । उनको पुच्छर निकम्मा बनेर गयो । प्रायः अविवाहित मानवका लुप्त पुच्छरहरू निकम्मा बनेर जाने गर्छ ।
कुकुरको पुच्छर मालिकलाई स्वागत गर्नमा अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको छ भने चौरी गाईको पुच्छरले भगवान्लाई हावा हम्किन नम्बर एक मानिन्छ । घोडाको घना पुच्छरले उसको सिङगो कदको शोभा बढाएको हुन्छ भने भैसी, बाघ, भालु, सिंहको पुच्छरको माध्यमबाट शरीरमा भन्किएका झिंगा, मच्छड, लामखुट्टे र प्राणीको एक अर्काको भाषा एक अर्कामा सम्प्रेषण गर्ने काम पनि पुच्छरले गर्छ । गाई जुन पुच्छरकै कारण पुजनीय छ हिन्दु धर्ममा । गाईको पुच्छर समाएर गाइ दान गर्नाले अलौकिक पुण्यलाभ हुन्छ, मृत्यु मार्ग सहज, सुगम हुन्छ भन्ने मान्यता मानव मात्रमा छ । ब्राह्मणले आफ्नो कर्मकाण्डको श्रीवृद्धि हेतु गाईको व्यापक व्याख्या गरेका कारण हिन्दू धर्मावलम्बीको मन मस्तिष्कमा गाईको सिङ्गो पुच्छर अमिट छाप बनेर घुसिसकेको छ ।
यस दुनियाँमा पुच्छरै छैन भनेर गमक्क पर्ने भाइ बहिनीहरुको गोप्य पुच्छरको त यहाँ वर्णन गरी साध्य नै छैन । करिब तीन करोड जनताको राजधानीको ठमेल बजार, पोखराको बागलुङ बसपार्क, लेकसाइड, आधुनिक बडिमसाज सेन्टरहरूमा हात्तीको देखाउने दाँत र चपाउने दाँत फरक पार्दै मानव पुच्छरहरू बडो स्वादका साथ कारोबार र ऐचोपैचो गर्दै एकार्काको श्रीवृद्धिमा मरिमेटेको देख्न भोग्न पाइन्छ । रत्नपार्क, महाबौद्ध, नेपालका साना ठूला सबै सहरहरूमा थोक तथा खुद्रा मानव पुच्छरहरूको बजार दिनानुदिन उँधै उभै सर्वत्र फैलिराखेको छ । पुच्छर विक्रेताको बेहोसीपनको मौका छोपेर रङ्गेहात पक्रिन सफल प्रहरी प्रशासन मानव पुच्छर तस्करी र बेचबिखनमा ठप्प विर्काे लगाउन रात दिन नभनी दौडिराखेको छ, पार पाउन सकेको छैन । तर मान्छे चाहिँ पुच्छर सुच्छर नभएको अत्यन्त सज्जन, शालीन प्राणी भन्दै मै राम्री मै पातलीको बिल्ला आफैतिर फर्काएर उग्राइराखेको देख्दा आफैलाई लाज लागेर आउँछ ।
व्यापारीको सिङ जुरो हुँदैन भन्ने भनाइ छ । सिङ र जुरो लडाइमा सत्कार गर्न प्रयोग गरिन्छ । जसरी उत्तर कोरिया र अमेरिकाले आआफ्नो सिङ जुरो देखाइ राखेका छन् । व्यापारीले जबरजस्ती गर्दैन फकाइ फुलाइ खुसी पारेरै हाँसी हाँसी फाँसीमा लड्काउन सक्छ । हुन पनि हो कि झैँ लाग्छ । वर्तमान नेपालको घना बजारमा के कुराको विक्री निस्फिक्री भइराखेको छ भन्ने कुराको ठेगानै छैन । अवैध अठासी किलो सुन फेला पर्छ तर मालिक फेला पर्दैन । शायद मालिकको अवमूल्यन या अधिमूल्यन हुने भयले भयङ्कर गुफामा लुतुक्क लुकेको हुन सक्छ ।
मानव बस्ती आज होस् या अस्ती मस्ती गर्न मरिहत्ते गर्छ । मान्छेकै लागि मान्छेले स्वादिला, रसिला, भरिला, पोटिला, चोटिला मन मुटु लुटिने आकर्षक तत्त्वहरुको विकास र विस्तार बेतोडले गरेका छन् । त्यसैको पछिल्लो प्रयोग र प्रक्षेपण बजारका सुन पसलमा छ्याप्छ्याप्ती देख्न भोग्न पनि पाइने पुच्छरको नाम हो हात्तीको पुच्छर । हात्ती भीमकाय भए पनि नाम मात्रैको पुच्छरले चित्त बुझाउँछ । जाबो एउटा लोखर्केलाई तेत्रो झ्याम्टो पुच्छर पुग्यो भने हात्तीलाई किन यति सानु । मान्छेको जस्तो पुच्छरको दुरुपयोग हुन्छ भनेर त होइन ? हात्तीको पुच्छर चौरी गाई या घोडाको जस्तो रौँ रौँ द्वारा अधिवेष्ठित घना, बाक्लो, लामो हुँदैन । क्यान्सरले कपाल झर्दा झर्दा निख्रिएको चुल्ठो जस्तो अलिकति टुप्पोमा फुर्काे मात्र भएको पुच्छर नै हात्तीको पुच्छर हो । घना पुच्छर हुनेको पुच्छर व्यापार नगरेर हात्तीकै पुच्छर किन ताके ?
हिजो आजका प्राय सुन पसलमा हात्तीको पुच्छर धारण गरे शुभलाभ हुन्छ भन्दै सुनको पारदर्शी पाताले ठाउँ ठाउँमा बेरेर हात्तीको पुच्छर भन्दै सुनको बाला हात्तीको पुच्छरसँगै सालाखाला गरेर बेच्ने गरेका छन् । सरकारी दररेट तोकिएको सुन पसलमा हात्तीको पुच्छरको भने रेट न सेट सजिलै हुन्छ ग्राहकसँग भेट । पुच्छरमा आगो लगाएर नाकले कसी लगाउने हो भने हात्तीको पुच्छर प्लाष्टिक पदार्थमा पर्दाे रहेछ क्यार पुरै प्लाष्टिक गन्हाउँछ । दस सेन्टिमिटर लामो एउटा पुच्छरको त्यान्द्रोलाई हात्तीछाप एउटै नोठले आउँदो रहेछ । दशवटा त्यान्द्रालाई दशवटै हात्ति छाप नोठ चाहिँदो रहेछ र मात्र हात्तीको पुच्छर पाइँदो रहेछ । टिलिक्क टल्किने दरो मानव त्वचालाई कोतरेर घाउ नै बनाइ दिने क्षमताको हात्तीको पुच्छरको बाला र व्यापारीको चाला सालाखाला उस्तै उस्तै लाग्यो । धनधान्यले सर्वमान्य हुन शुभ लाभको हुण्डरी आउने लोभमा तँछाड मछाड गर्दै महङ्गोमा पुच्छर खरिदेर आफ्नो बाहुमा सो गरे पछि सर्वत्र स्यालुट सिहार्नै हम्मे हम्मे पर्ने भए पछि हात्तीको पुच्छरको पछि को नलाग्ला र ?
हात्तीको पुच्छर र हात्तीको दाराको व्यापार यस्तै सुन पसले या ठूला ठूला माछाले गर्छन् । पक्रिनेले साना माछाको पुच्छर पक्रिएर तातो ढुङ्गामा उत्तानो टाङ लगाउने गरी पछार्दे पावर र पौरख देखाउँछन् । ठूला माछालाई चारो हालेका हालेकै पालेका पालेकै गरेपछि मौलाउँदैन त पुच्छर व्यापार । प्लाष्टिकलाई हात्तीको पुच्छर भन्दै खरिदने सज्जन मानवको व्यवहार, बुता र बुद्धिको ताल देख्दा सबभन्दा घना पुच्छर धारी त यहि हो कि जस्तो लाग्छ । भावी सन्तति, शैक्षिक बेरोजगारी, विदेशमा नविकेर नटिकेर फर्किएका युवा पुस्ता र समाजले हात्तीकै पुच्छरको कारखाना खोलेर आत्मनिर्भर भए भने कसरी अनर्थ भन्न सकिन्छ पुच्छर व्यापारलाई ? भविष्यलाई सुमार्गमा ठेल्न, पैसैपैसासँग खेल्न आजै देखि पुच्छरमा हात हालेर आत्मनिर्भर हुने जाँगर जगाइ हाल्नुहोस् । अन्यथा नराम्रोसँग पछुताउनु पर्ला है ।
फूलबारी शिवशक्ति मार्ग